Guurka caruurta aan Qaan-gaadhka ahayn ayaa ku badan qaar ka mid ah dalalka Aasiya - Cakaara News
Guurka caruurta aan Qaan-gaadhka ahayn ayaa ku badan qaar ka mid ah dalalka Aasiya
Layaabka Dunida:- Sida lagu shaaciyay bogaga internetka Booliska gobolka Balkh ee Waqooyiga Afghanistan ayaa soo xidhay waalidka dhalay laba caruur ah oo aroos loo dhigay, kuwaasoo lagu eedeeyay in ay ka shaqeeyeen guurka caruur yaryar.
Sawiro lagu faafiyay wargeysyada iyo baraha bulshada ee dalka Afghanistan ayaa muujinaya gabadh da'deeda lagu sheegay 8 jir oo loo guuriyay wiil 12 jir ah.
Arooskooda ayaa maalmo ka hor ka dhacay tuulo ku taalla Waqooyiga Afghanistan, meel u dhow soohdinta ay wadaagaan Tajikistan. Gabadha ayaa magaceeda lagu sheegay Mena oo ah gabadh rajo ah oo hooyadii dhashay ay dhimatay saman hore.
Aabaha dhalay gabadha ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in uu gabadhiisa ka helay sooryo ama lacag, uuna doonayay in uu lacagtaasi ku guursado xaas kale. Waxaa dalka Afghanistan ku badan gabdhaha yaryar ee loo guuriyo ragga aadka uga weyn, wallow ay taasi sharci darro dalkaasi ka tahay halka dhanka kalana ay sii badanayso dhalaanka la isu guuriyo.
Iyadoo ay jiraan Caruurtan la isugu guuriyay ayaana hadana la sheegayaa inaysan ku cusbeyn Afghanistan arinta guurka caruurta sabiga ah.